Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Amakhaya okuhlala Studios Merseyside Liverpool
I-1-10 yoluhlu lwe-115
IStudiyo yokurenta eLiverpool, Merseyside
Elavace Estates are delighted to offer this studio apartment in the newly renovated Silkhouse Court. This property is fully furnished, and offers a well lit and spacious accommodation. The property comprises an entrance hallway which leads through to the open plan living and kitchen and bedroom area...
Liverpool in Merseyside, L2 2lz
- Studio Flat; Fully Refurbished Throughout- Sefton Park Area- Months Rent In Advance- Homeowner Guarantor Required- £200 Deposit RequiredViewings are highly reccomended on the property to fully appreciate it. To arrange a viewing please contact us on or via email
Published by Property Link Ltd
629 Pound £
Ayivumeleki ngo-Matshi 2020, ixesha elifutshane livumela ukuqwalaselwa.Ubekwe kwindawo ethandwa kakhulu iBaltic Triangle, iSitalato i-Bridgewater yinjongo eyakhiweyo ye-bespoke, ukubonelela ngendawo yokuhlala studio, abafundi bezikhundla kunye nabaqeqeshi abancinci abavela kuzo zonke iiyunivesithi kunye neekholeji kuso sonke isixeko ...
Liverpool in Merseyside, L1 0ar
537 Pound £
Amakhaya eBluerow avuyela ukubonelela ngeli gumbi lesithandathu le studio studio kuphuhliso oludumileyo lwePark West. Ifakwe entliziyweni yeLiverpool Yokuqala, ipropathi ikufuphi kakhulu ukuthutha amakhonkco, iivenkile, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa. Ngokufuthi indlu inesicwangciso esivulekileyo sokuhlala, ...
Published by Bluerow Homes
Studio apartment with all bills included, free amazon echo dot, free on-site gym, luggage store, smart TV concierge. Available 1st March 2020. Students professionals welcome.**for A limited time receive an amazon echo dot when you sign for this apartment**Fully furnished throughout, this modern stud...
Ukubhekiswa kwiPropati: I-6961A isitudiyo esithandekayo esifakwe kwiLiverpool yamanzi. Idlulile kulungiso lwakutshanje, ifakwe ngewasha / yokomisa, isitya sokuhlamba kunye necandelo lomoya. Kukukuhamba umgama ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseJames. Kukwindawo yokuhamba umgama oya ngebhasi ...
Liverpool in Merseyside, L2 0pp
Published by Howsy
I-Liverpool sisixeko kunye ne-metropolitan e-North West England, kunye ne-491,500 yabantu abaqikelelweyo. Umda wayo wedolophu ngowesihlanu kwindawo enkulu e-UK, enabemi abazizigidi ze-2.24 kwi-2011. Amagunya endawo yiLiverpool City Council, esona sithili sikarhulumente wengingqi kwidolophu enkulu yaseMerseyside kunye nesona sikhulu kwiLiverpool City Region. ILiverpool ikwicala elingasempuma le-Mersey Estuary, kwaye ngokwembali yayilele kwikhulu lendawo yaseNtshona Derby kumazantsi entshona ye-Lancashire. Yaba yinto ebanjiweyo kwi1207 kunye nesixeko kwi1880. Kwi-1889, yaya kuba yindawo ezimeleyo yeLancashire. Ukukhula kwayo njengezibuko eliphangaleleyo kwafaniswa nokwandiswa kwesixeko kulo lonke utshintsho lwezoqoqosho. Kunye nokuphatha izinto ezithwaliweyo, iimpahla, izinto zokwenza izinto ezifana namalahle kunye nomqhaphu, abathengisi besixeko babandakanyeka kurhwebo lwamakhoboka lweAtlantic. Kwinkulungwane ye-19th, yayilizibuko elikhulu lokuhamba kwabafuduki baseIreland nabamaNgesi ukuya kuMntla Merika. ILiverpool yayilikhaya kuzo zombini iCunard kunye ne-White Star Line, kwaye yayilizibuko lokubhaliswa kweenqanawa zolwandle i-RMS Titanic, i-RMS Lusitania, iRMS Queen uMary kunye ne-RMS yeOlimpiki. Ukuthandwa kweeBeatles kunye namanye amaqela omculo ukusuka kwixesha leMerseybeat kunegalelo kwisimo seLiverpool njengendawo yabakhenkethi. ILiverpool ikwalikhaya leeklabhu ezimbini zebhola yePremier League, iLiverpool ne-everton, umdlalo phakathi kwento eyaziwa ngokuba yiMerseyside derby. Umdyarho wamahashe weSizwe oMkhulu uqhutywa minyaka le eAintree Racecourse ngaphandle kwesixeko. Isixeko sibhiyozele isikhumbuzo sayo se-800th e-2007. Kwi-2008, yonyulwa njenge-capital yaseYurophu yenkcubeko kunye neStavanger, eNorway. Iindawo ezininzi kumbindi wesixeko zinikezwe indawo yeLifa leMveli yeHlabathi yi-UNESCO kwi2004. I-Liverpool Maritime iMercantile City ibandakanya i-Pier Head, i-Albert Dock, kunye no-William Brown Street. Isimo seLiverpool njengesixeko sedolophu siye satsala abantu abahlukeneyo, abathi, ngokwembali, bathathwa kuluhlu olubanzi lwabantu, iinkcubeko, kunye neenkolo, ngakumbi i-Ireland neWales. Esi sixeko sikwanekhaya loluntu oludala lwase-Afrika abamnyama kweli lizwe kunye noluntu lwaseTshayina oludala eYurophu. Abemi bomthonyama kunye nabemi besixeko saseLiverpool babizwa ngokuba yiLiverpudlians, kunye ne-colloquential ngokuthi "Scousers", ireferensi "scouse", uhlobo lwesityu. Igama elithi "Scouse" likwayinto efanayo neLiverpool accent kunye nesithethi.